Indlu enkulu, ejikelezileyo, igadi entle - I-Airbnb
Indlu enkulu, ejikelezileyo, igadi entle
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAngelica
Indlu yethu inegadi entle, emelene nomsinga. Kukho izixhobo zebala lokudlala kunye nendlu yokudlala enemibala egadini. I-Laminate ngoku ibekwe kumagumbi okulala ama-3, kwaye iindonga zipeyintwa ngokunjalo. Siphinde sayala amakhethini amatsha kwaye siya kusebenzisa izixhobo ezininzi zase-Austrian kangangoko kunokwenzeka. Ikhitshi likhulu kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo. Kananjalo amagumbi okuhlambela ama-2 alungile kwaye aphantse ukuba matsha. Kwigumbi elingaphantsi kuya kuba negumbi lokutyibiliza. Ukususela ngo-Agasti indlu ikulindele!
Indlu inendawo eninzi enamagumbi okuhlambela ayi-2 kunye namagumbi okulala ama-4. I-balcony ngaphambili nangasemva kwendlu. Iingcango zegadi ene-terrace kunye ne-conservatory yeeyure zangokuhlwa. Ukuba ujonge iholide entle kwindalo, le yindawo yakho onokuthi ube kuyo.
Isitalato apho indlu ikhona, inezindlu ezizimeleyo, abantu abanobuhlobo. Ilali inecawe entle. Kutshanje kukho ikhefi kumgama wokuhamba ekwabonelela ngesidlo sakusasa. Indalo eyingqongileyo iyinyani kwaye i-gemütlich!
Kukho indawo esisigxina yoqhagamshelwano kwilali ukukunceda. Ngaphaya koko, ndihlala ndifumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile.